Tantara an-tsary mora hosarihina: inona no mety ho izy ireo ary inona ny programa tokony hampiasaina | Famoronana an-tserasera
Tantara an-tsary, sary an-tsary, tantara an-tsary, manga… Fantatrao ve izany? Nandritra ny taona maro dia anisan'ny vakiteninay izy ireo ary angamba ankehitriny izy ireo dia iray amin'ireo ampiasaina indrindra hampirisihana ny ankizy hamaky. Raha ny marina dia olana iray fa amin'ny fotoana sasany amin'ny fiainanao dia namporisika ny hamorona tantara an-tsary anao ianao, na dia tsy mahay manao sary aza ianao. Taloha dia sarotra izany, fa ankehitriny dia maro ny tantara an-tsary mora hitaona izany ary noho ny fampiasana sary, rindranasa ary programa izay “manao informatika” an'io kanto io
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba mora ny manao sary an-tsary Ary koa ny fanontanianao hoe inona ny fototry ny tantara an-tsary sy ny karazana programa, fampiharana, fitaovana ... afaka manampy anao, eto no ahitanao valiny.
1 Inona no atao hoe tantara an-tsary?
2 Ireo lafin-javatra hodinihina mba hahamora ny fanaovana sary ny tantara an-tsary
2.2 Ny fifamaliana
2.3 Ny endrika mampihomehy
3 Mora ny manintona karazana tantara an-tsary
3.1 Araka ny fomban'ny tantara an-tsary
3.2 Ny tantara an-tsary mora indrindra natao sary
4 Azo atao ve ny mamorona tantara an-tsary nefa tsy mahay manao sary.
Inona no atao hoe tantara an-tsary?
Voalohany indrindra, tsy maintsy mamaritra izay atao hoe tantara an-tsary isika. Araka ny RAE, ny tantara an-tsary dia andian-dahatsoratra na filaharan'ny vignette mitantara tantara iray. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia miresaka boky, magazine, tantara an-tsary, manga ... izahay izay miresaka ny tantaran'ireo mpilalao ireo amin'ny alàlan'ny sary sy lahatsoratra fohy.
Tsy misy halavany farafahakeliny na farany ambony raha ny fanaovana tantara an-tsary. Raha ny tena izy dia mety ho hitanao fa ny tantara an-tsary iray-panaka iray dia tantara an-tsary, fa azontsika atao koa ny manonona ireo asa toy ny Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach ... izay tanan'akanjo maro amin'ireo takelaka (tafangona anaty boky).
Ireo lafin-javatra hodinihina mba hahamora ny fanaovana sary ny tantara an-tsary
Raha te hanomboka hanao sary ny tantara an-tsary anao ianao, ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao dia ireo fototra ilainy. Ary io dia, toy ny tantara an-tsary, tononkalo, na fanoharana iray, dia zava-dehibe ny fahalalana izay tsy maintsy misy (sy mamaritra ny tantara an-tsary). Noho izany, ny antony lehibe indrindra dia ireto manaraka ireto:
Tsy maintsy apetrakao hoe iza no, na farafaharatsiny, iza no protagonista afaka hanome azy ny lanjan'izany. Mazava ho azy fa afaka mampiditra endri-tsoratra betsaka araka izay tadiavinao ianao, na ny lehibe na ny faharoa.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, miresaka ny tantaran'ny tantara an-tsary isika, izay tianao hotantaraina momba azy. Na dia mampiasa tantara an-tsary aza ny ekipa telo misy anao fotsiny, dia mila mahatakatra ireo sary telo ireo ianao, satria raha tsy izany dia tsy hisy hahatakatra izany.
Ny endrika mampihomehy
Indro Ilay izy izay hisafidiananao tantara an-tsary mora zahana na izay sarotra kokoa. Ary miankina amin'ny raha ny tianao hatao dia ny tantara an-tsary ny vignette sasany, raha te-hamorona pejy iray manontolo ianao, na koa te hanana pejy maromaro ianao hamoronana tantara iray matevina kokoa.
Raha sambany no nanoloranao hevitra anao hisafidy ny safidy voalohany ianao satria afaka mampiasa izany fomba izany ianao.
Mora ny manintona karazana tantara an-tsary
Ao anatin'ny mpanakanto boky tantara an-tsary dia misy fomba maro samihafa. Ny olona mifantoka amin'ny tantaram-pitiavana dia tsy mitovy amin'ny, ohatra, ireo izay maniry ny hanao sary an-tsary, hatsikana, tantara an-tsary sns Ary izany dia mahatonga karazan-tantara an-tsary maro karazana, ny sasany mora tohina kokoa noho ny hafa. Fa inona avy ireo fomba? Ary iza amin'izy ireo no tsotra indrindra?
Araka ny fomban'ny tantara an-tsary
Afaka milaza aminao izahay fa, arakaraka ny fomban'ny tantara an-tsary, azonao atao izao manaraka izao:
Adventure. Izy io dia iray amin'ireo be mpampiasa indrindra ary koa iray amin'ireo malaza indrindra. Fantatra ihany koa izy ireo ho karazana hetsika ary na dia mifantoka amin'ny mpijery lahy indrindra aza izy ireo, ny marina dia tsy misy na inona na inona manakana azy ireo tsy hanana mpihaino vehivavy.
Ady. Io fomba io dia nanomboka nanjary nalaza tamin'ny taona 40, nampianarin'ny Ady Lehibe Faharoa.
Hehy. Izy io dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra, ary iray na dia toa mora aza izy io indraindray dia tsy dia mora loatra.
Costumbrist. Io dia fifangaroana bebe kokoa eo amin'ny vanim-potoana ankehitriny sy ny hatsikana.
Erotic. Misy ny miantso azy hoe mamoa fady, ary, araka ny anarany, ny zavatra ataony dia ny mitantara tantara iray momba ny firaisana, izay nanjakan'ny sary sy ny onomatopoeia noho ilay tantara (na ilay lahatsoratra).
Fantastic. Miorina amin'ireo maherifo izay miady amin'ny olon-dratsy, ary mandresy ny ratsy foana ny tsara.
Tantara. Fomba iray hanatonana ny tantaran'ny firenena, na hetsika manan-tantara, amin'ny alàlan'ny sary.
Romantic. Amin'ity tranga ity, ary tsy mitovy amin'ilay erotika, ny tena zava-dehibe dia ny tantaram-pitiavana sy tantaram-pitiavana mipoitra eo anelanelan'ny mpilalao, tsy misy famaritana, na sary aza, amin'ity karazana fanaovana firaisana ity.
Ny tantara an-tsary mora indrindra natao sary
Rehefa mieritreritra ny hanao sary an-tsary, miorina amin'ny fomba efa noresahintsika tetsy ambony, dia tena azo inoana izany ireo adventures, hatsikana ary fomba amam-panao no mora hitaona, satria lohahevitra afaka manintona ilay olona izy ireo na mahita mpihaino lehibe kokoa hampahafantatra ny tenany.
Izy ireo koa dia iray amin'ireo maodely indrindra hitanao, indrindra fa miaraka amina karazana endri-tsoratra noforonina.
Azo atao ve ny mamorona tantara an-tsary nefa tsy mahay manao sary.
Farany, te hiresaka olana iray mety hitranga amin'ny maro isika: te-hanao tantara an-tsary, manandrana tantara an-tsary mora hitaona ary tsy afa-po amin'ny vokatr'izany. Talohan'izay, rehefa nanana faniriana ianao fa tsy nanana talenta hosarihana dia tsy afaka nanao na inona na inona ianao. Na firy na firy na firy hevitra tany am-boalohany nanananao, na betsaka araka ny fantatrao ny votoatin'ny tantara an-tsary, raha tsy nahazo sary mahafinaritra ianao dia tsy nahasarika ny sain'ny olona izany.
Fa anio fa ny "scarcity" amin'ny sary dia voavaha miaraka amin'ireo programa informatika. Mazava ho azy fa voafetra ireo, ary tsy ho hitanao izay rehetra eritreretin'ny eritreritrao; fa fomba iray hanatanterahana izany nofy izany amin'ny alàlan'ny tantara an-tsary mora hitaona izay efa "noforonina mialoha". Ny sisa ataonao dia ny manome azy ny endrikao.
Ary inona ny programa na pejy afaka manampy anao hanatanteraka ny fanirianao ho "mpanakanto tantara an-tsary". Izahay dia manoro hevitra ireto manaraka ireto:
Pixton, Strip Generator, Toondoo.com, Stripcreator ... Ireto misy pejy manampy anao hamorona tantara an-tsary mora volavolaina satria manome anao ny base hiaraha-miasa izy ireo. Ho fanampin'izay, amin'ny Internet dia afaka mahita maodely izay efa nanoratanao ireo tarehin-tsoratra ianao, ary afaka manompo izy ireo ho toy ny mpitari-dalana. Ohatra, ny sarin'alika dia azo avadika ho saka manaraka ny lamina mitovy ary manova kely.
Afaka mandeha. Ho fantatrao ity fitaovana ity rehefa mihamaro ny olona mampiasa azy. Fa ny mety tsy fantatrao dia ny manana fizarana manokana hanamboarana tantara an-tsary mora entina: Canva Comic Strip. Ao anatin'izany no ahafahanao mamolavola sary, fiaviana, lahatsoratra, ary mampiasa ny sarinao sy ny sarinao aza hamoronana azy.
Manorata tantara an-tsary. A background, vignettes, character ... Afaka mamorona tantara an-tsary ianao ao anatin'ny minitra vitsy. Mazava ho azy fa mifototra amin'ny kofehy mahazatra izy io, koa raha mitady zavatra maoderina kokoa ianao dia mety mila mampiasa fitaovana hafa.
Witty Comics. Ary miresaka fitaovana maoderina kokoa. Eto ianao no manana. Ianao dia afaka mamorona tantara an-tsary anao ao anatin'ny minitra vitsy. Raha ny marina, ny valiny ho azonao dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny Internet, ka mendrika jerena izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Mora ny manao sary an-tsary